ah Archives – Axadle
Jabuuti oo dalkeeda ka masaafurineysa 16 Askari oo Itoobiyaan ah
Jimco - Dowladda Jabuuti ayaa dalkeeda ka musaafurineysa ilaa 16 Askari oo Itoobiyaan ah, kuwaa oo sida la sheegay gacan saar dhaw la leh Jabhada difaaca Tigray-ga. Sida ay sheegtay Warbaahinta gudaha Jabuuti 16 kan Askari oo ay ka mid yihiin Korneelo iyo Taliyayaal ayaa waxaa qabtay ciidanka ilaalada madaxtooyada kuwaa oo ku u gudbiyay xarunta hay'adda sirdoonka si baaritaan loogu sameeyo. Sida qorshuhu ahaa Askartan ayeey aheyd in laga masaafuriyo dalka Jabuuti Arbacadii toddobaadkan, si rasmi ahna looma oga in…
Uganda oo qeyb ka mid ah ciidamadeeda kala baxday Soomaaliya
Jimco, Dowladda Uganda ayaa kala baxday Soomaaliya qeyb ka mid ah ciidamadooda ka tirsan howlgalka midowga Africa AMISOM. Ciidamadan oo gaaray dalka Uganda ayaa tiradooda lagu sheegay 2,100, iyadoo munaasabad soo dhaweyn ah loogu sameeyay xalay xarunta Tababbarka Howlgallada Taageerada Nabadda (PSO-TC) ee degmada Nakaseke. ku-xigeenka Taliyaha Ciidamada Difaaca Wilson Mbasu Mbadi ayaa soo dhaweeyay kaas oo ku hadlayay magaca abaanduulaha ciidamada difaaca, wuxuuna ku yiri: “Si sharaf leh ugu soo dhawaada dalkiina…
Jimco- Turkiga ayaa siiyay ku dhowaad 3.4 milyan oo deyn ah oo Soomaaliya ay ku leedahay Sanduuqa Caalamiga ah ee Lacagta Adduunka (IMF), iyada oo qayb ka ah dadaallada la bilaabay horaantii sanadkan si looga cafiyo deymaha culus ee dalalka dakhligoodu hooseeyo. Sida ku xusan Heshiiska Caalamiga ah ee la soo saaray 5-tii Nofeembar, Turkiga wuxuu ugu deeqay Soomaaliya ilaa 3.4 milyan oo doollar oo loogu talagalay barnaamijka IMF ee Wadamada Saboolka ah (HIPC). Turkiga iyo Soomaaliya ayaa leh xiriir dhow iyo iskaashi tan…